Maqaallo – Somali Sounds
July 21, 2020 July 21, 2020 Somali Sounds.comComment(0)
July 21-07 2020 “Shirka Dhuusa-mareeb” Madasha Qurba-joogta Mudulood (Muqdisho Principle) kadib markay tala la wadaagtay bulshada deggan G/Banaadir oo ay hogaan ka yihiin Odayaasha Dhaqanka, Siyaasiyiinta, Culamaa’udiinka, Dhaliyaradda, haweenka,bulshada rayadkaa iyo dhamaan Shacabka ku dhaqan Gobolka Banaadir, waxay si weyn u canbaareynayaan, sida loogu tagrifalay,looguna xadgudbay xubin-nimadii Shacabka Gobolka Banaadir ku matali lahayd Shirka Wadatashiga […]
Shirka Jabuuti ee Soomaalida
June 15, 2020 June 15, 2020 Somali Sounds.comComment(0)
Soomaaliya waxay qalalaaso siyaasadeed ku jirtay laga soo bilaabo 1969 taasoo ay sabab u aheyd rag Somali ah oo aaminsan in ay Xukunka ayaga kaliya hagaajin karaan marki dambe-na aaminay in iyaga mooyee cid kale aysan Dalka maslaxad u wadin (Kaligii Wadani) waana tan maanta na dhaxalsiisay Xaaladda aan kujirno iyo kala qoqobka. Aragti shalay […]
Maqaam (Status) Mise Matalaad (Representation)
Matalaadu:- Waa in Muwaadiniintu ay joogaan meelaha go’aanada siyaasadeed lagu jaangooynayo (Golaha Shacabka) si aysan ugu kadsoomin go;aano masiiri ah oo ay qaadanayaan Jilayaasha Siyaasadeed (Political Actors). Maqaamku waa qaabka Maamul ay Caasimaddu yeelaneeyso marki loo fiiriyo Gobolada iyo Magaalooyinka xubnaha ka ah Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Caasimadaha Federal-ka ah ma fiicanyihiin […]
Yaa Beel-weynta Yoonis Daanweyne u hadlay
March 31, 2020 March 31, 2020 Somali Sounds.comComment(0)
Shir shalay ka dhacay Hall-ka Afnaan ee Magaaladda Muqdisho ayaa waxaa ka hadlay dhalinyaro sheegatay matalaada beel-weynta Yoonis Daanweyne ee Beesha Wacbuudhan Abgaal. Marki aan ka hadlo abaabulka iyo intii ka qeyb gashay shirkaas, kama aysan muuqan Nabad doonadi caanka ahaa ee Beeshu laheyd iyadoo meesha lagu arkayay dhalinyaro sheeganeeysa matalaada Siyaasadda iyo Dhaqanka beesha. […]
Ma Abgaalka Dhawaq Hadalkii ka dhuuntaaa Mise Abgaalkiii Hore.
August 2, 2019 August 2, 2019 MogadishuComment(0)
Dhawaq hadalka Bulshada somaaliyeed waxaa u dhaxeeya kala duwanaan iyo Aray Soo Tufida Af-ka somaaliga oo doodba ka jirton,waa waxa lagu kala garto Gobolka Uu qofka Kunoolaa, ama uu kusoo koray, waa tilmaaam horay Loga Soo qabanaayo qofka Markuu hadlo. Tusaale aan usoo qaadano dhawaqa U yeerida qof aan Magaciisa la garaneen Sida ( War-yeee […]
Maqaallo Nolosha SHEEKOOYIN
Gabar kasta oo Soowjad xun la yiraahda ninkaa ku xumaada sababta…
July 28, 2019 July 28, 2019 MogadishuComment(0)
Gabar kasta oo Soowjad xun la yiraahda ninkaa ku xumaada sababtuna waxaan u leeyahay Alaah(SWT) waxa uu yiri: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . Maraka Haduu Ninku Nin adag Oo Gabadha indhahadeeda Buuxiya qalbigeedana buuxiya Yahay Ma Noqon Karto Oori Xun. Gudashada Waajibka Aabenimo Iyo Buuxiinta iyo dhameys tirka Baahiyaha qoyska ayaa Tiir adag u ah […]
Somalia Oil & Gas News Monitoring Kheyre iyo Farmaajo oo isku qilaafsan xil ka qaadista agaasimaha wasaaradda Batroolka
May 21, 2019 May 21, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Somalia Oil & Gas News Monitoring in agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka JFS loo magacaabay si qarsoodi ah Karar Doomeey bishi May ee sanadkan 2018. Karar Doomey aya ka soo jeeda beesha Madaxweyne Farmaajo, wuxuuna ahaa agaasimihii seddexaad ee uu magacaabo kana soo jeeda beesha Madaxweyne Farmaajo. Sida ay xogta ku heshay Somalia Oil & […]
MUQDISHOOY, colka waraf ma lagu dayay?
May 15, 2019 May 15, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Rag ayaa is weydiiyay hadda ka hor “ma taako ayaan dhaqaaqnaa mise tabar”? Markaasey qaar dhaheen ” aan tabar dhaqaaqno”. Sabab walbo haku timaadee, magaalada Muqdisho iyo Gobolka Banaadirba weli ma yeelan maqaam dastuuri ah. Waxaa taas usii dheer in madaxda Gobolka iyo caasimadda Muqdishaba aan lasoo dooranin balse ay ku yimaadaan magacaabista Villa Soomaaliya. […]
Muqdishow guri Ka dhiso, mid kalena dhis.
May 4, 2019 May 4, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Mogadishu Muqdishow guri Ka dhiso, mid kalena dhis.Maanta waxaan Ka Soo lugeeyay Seey Biyaano aniga oo is leh Bajaaj Ka sii raac Busteejada Daarta Zoobe, waxaan arkay aniga oo taagan K4.Goor aan Soo gudbay ma ogeeyn, waxaan inta badan Ka fekeray Kirada Guriga aan degenahay iyo Bishii oo dhamaatay. Bajaaj ayaan Ka Soo raacay K4 […]
Puntland mowqifkeeda waa cad yahay ee yaa war kahaya Maamuladda kale sida Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, Koofur Galbeed mawqifkooda?
Maamulka Jubaland amuu Ahmed Madoobe heshiis Xukuumadda Kheyre iyo Fahad ee qiyaamadda ah aaminaa oo ka gaabsadaa awood marooqsiga Dawladda Federaalka, arintaa oo haddii ay dhacdo Ahmed Madoobe Mustaqbalkiisa siyaasadda soo afjarmayo. Mawqifka Galmudug oo Madaxweyne Xaaf hogaamiyo iyo ASWJ oo ku biirtay waa sidee? Waxaan filayaa inuu cadeysan doonaan.Mida kale siyaasiyiinta iyo Xildhibaanadda kasoo […]